Fiampitana Arabe Miloko Avana Ao El Salvador Mampiroborobo Ny Fiarovana Ny Mpandeha An-tongotra Sy Ny Zon’ny LGBTQ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Jolay 2017 16:27 GMT
Vakio amin'ny teny English, Português, Français, Ελληνικά, 繁體中文, 日本語, Italiano, Español
Sary avy tao amin'ny lahatsary tatitra nataon'ny fahitalavitra El Faro. Nozaraina eo ambanin'ny lisansa Creative Commons .
Ao El Salvador, nandoko ny fiampitana arabe manelanelana ny Lalamben'ny Heroes sy ny Araben'ny Andes amin'ny lokon'ny saina fireharehan'ny LGBTQ izay miloko avana ny mpanakanto mihoatra ny 20 sy mpikatroka mpiaro ny zon'ny LGBTQ. Ity no fotoana voalohany nanomezan'ny firenena Amerika Afovoany alàlana ho fanohanana ny vondrom-piarahamonina LGBTQ tamin'ny hetsika toy izany.
Mba hananana asakanto maharitra ao afovoan-tanàn'ny renivohi-pirenena, nahavita dingana lehibe manoloana ny fisehoan'izy ireo sy ny maha ara-dalàna azy ireo eo amin'ny fiarahamonina ny vondrom-piarahamonina LGBTQ Salvadoriana, zavatra izay mihoatra lavitra noho ny Volana Reharehan'ny Gay izay nokarakaraina tamin'ny volana Jona.
Jereo ny lahatsary tatitra (amin'ny teny Espaniola) izay nalain'ny Fahitalavitra El Faro. Mampiseho ny tatitra fa niara-nisalahy tamin'ny fomba samihafa ny mpanakanto ary nanomana zavakanto an-tsehatra. Ho an'i Nicolás Rodriguez, mpikatroka ny zon'ny LGBTQ sady mpikarakara voalohany ao ambadiky ny hevitra , azo jerena ho marika fanajana lehibe ho an'ny mpandeha an-tongotra, sy ho an'ny fahasamihafana ara-pananahana eo amin'ny lahy sy ny vavy ny fiampitana arabe miloko avana :
Mankalaza izany nanomboka hatramin'ny namoronana azy ny mpanakanto ary hanana ny fiantraikany maharitra eo amin'ny fiarahamonina Salvadoriana ilay antsoina hoe “Ilay Seho Lehibe eny amin'ny Lanitra.” Ankoatra ny fanehoany ny fahasamihafana ara-nofo izay ahitana ny olom-pirenena Salvadorian rehetra dia mikasa ny hanome fiarovana bebe kokoa ho an'ny mpandeha an-tongotra ihany koa ny tetikasa .
“Olona mitovy avokoa isika rehetra ; manampy amin'ny fampihenana ny herisetra ny miaina ao anatin'ny fandriampahalemana sy ny firindrana, ary mandray anjara amin'ny fiarovana ny mpandeha an-tongotra, indrindra fa ny mpandeha an-tongotra izay mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina LGBTQ ity hetsika ity, mba tsy hijaly noho ny herisetra ataon'ny mpamily izy ireo, ” hoy Nicolás Rodríguez, iray amin'ireo mpikarakara raha naneho hevitra .
Mijaly noho ny fitomboan'ny herisetra mamely ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina LGBTQ i El Salvador, indrindra fa ireo izay niova taovam-pananahana na ny sady lahy no vavy . Na dia teo aza ny fandraisana an-tanàn'ny governemanta ho fiarovana ny zon'ny vondrom-piarahamonina LGBTQ dia tsy nihena ny isan'ny fanafihana atao amin'ny olona LGBT, anisany anton'izany ny olana mifandraika amin'ny andian-jiolahy sy ny herisetran'ny polisy izay niafara tamin'ny famonoana ny pelaka, sady lahy no vavy na niova taovam-pananahana maherin'ny 600 nanomboka tamin'ny taona 1990. Hita amin'izao fotoana izao ihany koa ireo herisetra ireo, tsy eo amin'ny lafiny herisetra ara-batana ihany fa hita amin'ny tranga hafa ihany koa izay ahitana ny olona mijaly noho ny fandrahonana, halatra, ary ireo noroahana (tao amin'ny tranony na ny fireneny).
Eto amin'ity tranga ity, dingana miroso ho any amin'ny zon'ny vondrom-piarahamonina LGBTQ ao El Salvador ity zavakanto hita ampahibemaso ity .